February 2018 - Ceelhuur Online
February 28, 2018 admin2542 Comments on Daawo: Xafladda Soo dhaweynta Dib u heshiisiinta Madaxweyne Farmaajo ee Galmudug
Magaalada Cadaado ayaa waxaa lagu qabtay Xafladda Soo dhaweynta Dib u heshiisiinta Madaxweyne Farmaajo ka sameeyey deegaanada Galmudug. Munsaabadda ayaa waxaa ka soo qeyb galay Dhalinyaro ka socotay degmooyinka Cabudwaaq iyo Cadaado. waxaana goobjoog ka ahaa la taliyaha Madaxweynaha Soomaaliya dhanka Arimaha Diinta Sheekh Abuukar , wasiiro iyo xildhibaano Galmudug. halkaan ka daawo muuqaalka dhameystiran.. […]
February 28, 2018 admin230
Ciidamada Millitariga dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen Duqeyn 26-kii bishsan Talaadadii ina dhaaftay ka dhacday meel ku dhow degmada Jillib ee Gobolka Jubbada Dhexe in ay ku dileen laba Dagaalame oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab, mid kalena ay ku dhaawaceen. War qoraal ah oo ka soo baxay Taliska Mareykanka Afrika ee AFRICOM ayaa waxaa […]
February 28, 2018 admin227
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa maalintii labaad ku sugan magaalada Dhuusamareeb Caasimadda Galmudug, Madaxweynaha oo shalay si diiran loogu soo dhaweeyey ayaa la filayaa inuu maanta booqdo hogaamiyaha ugu sareeya Ahlu sunna waljamaaca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan. Booqashadaasi kadib ayaa waxaa maanta galinka dambe la filayaa inuu bilowdo Wadahadal u dhaxeeya […]
Ciidanka Xoogga Dalka oo la wareegay Moqokori
February 28, 2018 admin262
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in Ciidamada dowladda ay saakay la wareegeen deegaanka Moqakori ee gobolkaas oo ay ku sugnaayeen dagaalyahanada Al-Shabaab. Ciidamada dowladda oo xalay Saqdii dhexe ka baxay degmada Maxaas ayaa weeraray deegaanka Moqakori,waxana la sheegay in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus ugu dambeyna ay ciidamada dowladda […]
Muqdisho : Qaraxyo Baabuur oo laga digay
February 28, 2018 admin231
Digniino ku aadan weeraro Al-Shabaab ku qaado Garoonka diyaaradaha iyo Labo Hotel oo ku yaalla Wadada Maka Al-Mukarama ayaa la soo saaray, iyadoo farriimahan la xiriira digniinahan ay soo saareen sirdoono shisheeye oo ku sugan Xerada Xalane. Fariimahan ayaa loo kala dusiyay dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin Hey’addaha ammaanka dowladda Soomaaliya, sida […]
Sawirro: Wafdi Turki ah oo maanta Booqday magaalada Hobyo
February 27, 2018 admin325
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa Magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ku soo dhaweeyay wafdi uu hogaaminayey safiirka dowladda turkiga u fadhiyo Soomaaliya mr. Oglen Beker. Wafdigan oo ay wehliyaan masuuliyiinta Galmudug ayaa wada booqday dekadda degmada Hobyo oo dhawaan dhismaheeda uu bilaaban doono, halkaa ayuuna safiirka ka sheegay in turkiga ay kaalintooda […]
February 27, 2018 Hafsa Haji219
Paris Saint-Germain ayaa xaqiijisay in Neymar uu jab ka soo gaaray lafta shanaad ee farha lugta midig islamarkaana uu ka murgadacay canqowga , Ciyaaryahanka reer Brazil ayaa garoonka ka baxay intii lagu jiray kulankii Ligue 1 ay 3-0 kaga badiyeen Marseille habeenkii Axada. Dhibaatooyinka ayaa la sheegay in ay ka qeyb qaadanayaan in weeraryahanka todobaadka […]
Cristiano Ronaldo “wax walba oo aan ku Riyooday waan ku guulaystay”
February 27, 2018 Hafsa Haji302
Xiddiga Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa shaaca ka qaaday inuusan hayn riyo danbe oo kubadda cagta ah oo kaga dhiman inuu rumeeyo. Kabtanka Portugal ayaa guulo waaweyn kubada cagta ka gaaay, wuxuu ku guuleystay shan horyaal iyo afar koob oo Champions League ah inuu uu joogay Manchester United iyo Madrid. Xiddig ahaan, Ronaldo ayaa sidoo […]
Sawirro: Madaxweynaha Galmudug oo si diiran loogu soo dhaweyey Dhuusamareeb
February 27, 2018 February 27, 2018 admin224
Madaxda Dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa goordhow soo gaaray magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug, Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir, masuuliyiin iyo qeybaha bulshada ayaa ku soo dhaweeyey wafdiga Madaxweynaha garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur. Sidoo Madaxweynaha ayaa salaanka ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka Ahlu sunno, Mr Xaaf ayaa Saxaafadda u sheegay inuu u […]
Nin Ganacsade ah oo lagu dilay duleedka Muqdisho
February 27, 2018 admin215
Dabley hubaysan ayaa nin dukaanle ahaa waxa ay ku dileen duleedka Magaalada Muqdisho, kadib markii ay ku dhex toogteen goobtiisa ganacsiga. Wararka ayaa sheegaya ninka la dilay in lagu magacaabi jiray Maxamed Xuseen Kaahiye (Shangaani), dilkiisan ay ka dambeeyeen rag hubaysan oo bistoolado watay. Ragga dilka u gaystay ninkaan ayaa ugu tagay goobtiisa ganacsiga, kadibna […]